Gịnị bụ ala ọma jijiji: njirimara, ebili mmiri na seismology | Network Meteorology
N’ezie, ọ dịtụla mgbe ị na-ama jijiji n’ụwa ma ọ bụ na ị hụla ịma jijiji ma ị maghị ihe kpatara ya. A na-ekwukarị banyere ala ọma jijiji ugboro ugboro, mana ọtụtụ ndị amaghị gini bu ala oma jijiji n’ezie, mmalite ya na ihe na-akpata ya. Iji ghọta mmalite nke ihe na-akpata ala ọma jijiji anyị ga-enwerịrị ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi banyere ala.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ala ọma jijiji bụ, ihe sitere na ya, ihe na-ebute na nsonazụ ya.
1 Gịnị bụ ala ọma jijiji
2 Mmalite nke ala ọma jijiji
3 Seismic mmiri na ebili mmiri
4 Seismology na mkpa
Ala ọma jijiji bụ ihe onu site na nkpatu nke ala, n'ihi esemokwu nke tectonic plate ndị na-etolite n'elu ụwa anyị. Ma site n’ugwu gaa n’ihe a na-akpọ mmejọ, enwere ike ịchọta ya n’akụkụ ọnụ efere, nke bụ ihe na-eme mgbe efere abụọ kewara. Ihe kachasị ama bụ na North America, ebe a hụrụ mmejọ San Andreas. Ebe ndị a dere ala ọma jijiji kachasị mbibi, ọbụnadị na-erusi ike karịa 7,2 na ọkwa Richter.
Ọ bụ ezie na ọkwa kachasị ama bụ Richter n'ọtụtụ, nke naanị na-atụle nha nke ihe ịtụnanya, ndị ọkachamara na-ejikwa Mercalli n'ọtụtụ iji tụọ mmetụta ọ nwere na gburugburu ebe obibi, yana oke ala seismic ugbu a iji chọpụta ịdị ike na ịdị anya. a chụpụwo ya.
A chịkọtara ọnụ ọgụgụ Richter na:
Ike 3 ma ọ bụ obere: ọ naghị enwekarị mmetụta, mana ọ ga-edebanye aha na agbanyeghị. Ọ naghị ebibi mmebi doro anya.
Ihe ike site na 3 ruo 6: kwesiri ngosi. Nwere ike ibute obere mmebi.
Ihe ike 6 ruo 7: Ha nwere ike imebi obodo niile.
Ihe ike 7 ruo 8: mmebi ka mkpa. O nwere ike ibibi mpaghara karịrị kilomita 150.
Ala ọma jijiji nwere ihe karịrị ogo asatọ nwere ike ibibi nnukwu ihe na ọtụtụ kilomita. Mana ọ nweghị ndekọ ọ bụla nke iru ogo a na mba anyị.
Mmalite nke ala ọma jijiji
Ala ọma jijiji na-ebute ngagharị nke mbadamba tectonic. Nke a bụ n'ihi na mbadamba ndị a na-emegharị oge niile ma na-ahapụ ike n'oge mmegharị. Enwere ike kpatara ha site na mgbawa ugwu n'ihi na a na-ahụta ha dị ka ebili mmiri sitere n'okike. Ihe anyị na-ahụ ha bụ ebili mmiri seismic site n'ime ụwa. E nwere ụdị ebili mmiri dị iche iche, ha niile nọchiri anya ya na seismogram.
Ala ọma jijiji n’onwe ya bụ ịma jijiji n’elu ụwa, nke sitere na ike na-ewepụta na mberede n’ime ụwa. Ntọhapụ nke ike a sitere na mmegharị nke tectonic plate, nke na-ewepụta ike n'oge mmegharị. Ha nwere ike ịdị iche nha na ike. Earthqufọdụ ala ọma jijiji na-esighi ike nke na ọ naghị enwe nkwado. Otú ọ dị, ndị ọzọ nwere ike ime ihe ike nke na ha nwere ike ibibi ọbụna obodo.
Usoro ala ọma jijiji ndị na-eme na mpaghara a na-akpọ ọrụ seismic. Ọ na-ezo aka ugboro ole, ụdị, na etu ala ọma jijiji mere ebe a oge ụfọdụ. N’elu ụwa, ala ọma jijiji ndị a na-egosi dị ka ala a na-eme ka ọ maa jijiji na ebe obibi ya na-adịru nwa oge.
Ha na-apụtakarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'ụwa, ma ọ bụ n'akụkụ efere tectonic ma ọ bụ na mmejọ. Anyị maara na ụwa anyị nwere isi anọ dị n'ime: isi dị n'ime, isi elu, mkpuchi na jikọrọ ọnụ. Ihe mejupụtara akụkụ ahụ nke uwe mgbokwasị ahụ bụ nke okwute okwute, ebe enwere oke okwute ntụgharị, nke na-akwalite ngagharị nke efere tectonic ma yabụ kpatara ala ọma jijiji.
Ndokwa nke ala ọma jijiji bụ n'ihi mgbasa nke ebili mmiri na-eme n'ime ụwa. Anyị na-akọwa ebili mmiri dị ka mmiri na-agbanwe agbanwe, nke na-eme na mgbasa nke mgbanwe nwa oge na mpaghara nrụgide ma na-akpata obere mmegharị nke tectonic plate. Ọ bụ ezie na anyị na-akpọ nke a mmegharị nke mbadamba tectonic, anyị ga-amarịrị na mmegharị a doro anya na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta ya. Ọ bụ afọ ndị a ka teknụzụ teknụzụ ji nwayọ nwayọ karịa ọtụtụ nde afọ gara aga. Afrika ọ na-akpali naanị 2 cm kwa afọ na nkezi. Nke a bụ ihe ụmụ mmadụ na-apụghị ịghọta.
Ekwesiri ighota na enwere otutu uzo nke ebili mmiri nke enwere ike meputa. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ mmadụ nwere ike ịmepụta ebili mmiri seismic artificial site na iji usoro mmịpụta gas dị ka ihe mgbawa ma ọ bụ mgbawa hydraulic.
Ebili mmiri dị n'ime ya bụ ebili mmiri nke na-agbasa n'ime ụwa. Anyị maara na ihe dị n'ime ụwa anyị dị mgbagwoju anya. Wepụ ozi a na-egosi na e nwere ụdị ebili mmiri dị iche iche. Nke a bụ mmetụta yiri Refraction nke ebili mmiri.
A na-akọwa P ebili mmiri dị ka ebili mmiri nke na-eme na ala na-agbakọ agbatị ma bụrụ ebili mmiri na-agbasawanye na nduzi nke mgbasa. Ihe bụ isi nke ebili mmiri a bụ na ha nwere ike ịgafe ihe ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ ya. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị nwere ebili mmiri S, ụdị ebili mmiri a nwere ntụgharị nke agagharị na ntụpọ mgbasa. Ọzọkwa, ọsọ ha na-adị nwayọ karịa ebili mmiri P, yabụ ha na-apụta n’ala ogologo oge ma emechaa. Ebili mmiri ndị a enweghị ike ịgbasa site na mmiri mmiri.
Seismology na mkpa
Seismology bụ sayensị na-amụ ihe omume ala ọma jijiji. N'ihi ya, ọ na-amụ banyere nkesa nke ohere-oge, usoro elebara anya na ịhapụ ike. Ihe omumu banyere mgbasa nke ebili mmiri nke ala oma jijiji na-edeputa ihe omuma banyere odidi ha, uzo ha, njuputa ha na uzo ha. N'ihi ebili mmiri, Enwere ike inweta ọtụtụ ozi gbasara ime ụwa. Anyị makwaara na ọ bụ ala ọma jijiji na-ebute ha ma bụrụkwa nke ndị ọrụ mgbasa ozi na-agbanwe agbanwe na-ekpebi. Nke a pụtara na ọsọ ya dabere na ngwongwo na-agbanwe nke onye na-ajụ ya, yana nkesa ya nwere ike ịmụ site na ịlele oge mgbasa na njupụta nke ebili mmiri ndị a.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe ala ọma jijiji bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ ala ọma jijiji